Izinketho zeehambo zokuya eCancun eMexico - Ukuhamba Ngenqanawa Cruise Destinations
Iitattoo Izixhobo E Izixhobo
Izinketho zeehambo zokuya eCancun eMexico
IMexico yindawo ethandwayo yabantu baseMntla Melika kuba kulula ukufikelela kuyo kwaye inika iilwandle ezinomtsalane, inkcubeko edlamkileyo kunye nembali eyadlulayo.ICancunyenye yezona ndawo zithandwa eMexico; Apha uya kufumana zonke izibonelelo zale mihla kunye nezitofotofo zeklasi yokuqala ye-oasis edibene nenqwaba yemisebenzi yolonwabo kunye neendawo zembali zakudala ezinje Chichen Itza . Inye into uCancun anganikeliyo lizibuko elinzulu ngokwaneleyo kwiinqanawa zokuhamba ngenqanawa, kodwa oko akuthethi ukuba abahamba ngenqanawa baphume ngethamsanqa.
Ukuya eCancun ukusuka kwiNqanawa yokuHamba ngenqanawa
Izibuko eliphambili lomnxeba elikufutshane neCancun, kwaye enye yezona nqanawa zihamba kakhulu eMexico, yiCozumel. Ifunyenwe kwincam yePeninsula yaseYucatan, iCozumel ithandwa kakhulu kwimigca yokuhamba ngenqanawa enje ngeCarnival, uSaziwayo, iDisney, iHolland America, iiLwandle ezisixhenxe zeRegent kunye neRoyal Caribbean. Kukulungele ukujonga iindlela zokuhamba ukuze ubone ukuba yeyiphi iinqanawa ezibonelela ngaphezu kobusuku obunye eCozumel.
Ukuhamba ngenqanawa eTuscany
Imifanekiso yoBomi bobusuku kwiinqanawa zokuhamba ngeenqanawa
Indawo yokuhamba ngeenqanawa ukusuka eNew Orleans
Ukufumana ukusuka eCozumel ukuya eCancun, kuya kufuneka ulandele indlela yomhlaba kunye nolwandle.
Kukho iindawo ezintathu zokuhamba ngenqanawa ezihamba ngenqanawa kunye nenqanawa enye yasekhaya enokuthi abakhweli bayise ePlaya del Carmen ukuya eCancun. Ukuba inqanawa yakho yokuhamba ngenqanawa iza kungena ePuerta Maya okanye kwiPier yaMazwe ngaMazwe, thatha enye yeetaxi ezilindileyo kwisikhululo seenqanawa. Ukukhwela kuya kuthatha malunga nemizuzu esixhenxe, kuxhomekeke kutrafikhi. Abahambi ngeenqanawa abafika ePunta Langosta Pier banokuthatha uhambo lwemizuzu emihlanu ukuya kwisikhululo seenqwelomoya.
IPunta Langosta Pier ikumbindi wedolophu yedolophu iSan Miguel.
I-TMM International Pier imalunga neekhilomitha ezingama-5 kumazantsi edolophu yaseSan Miguel.
I-Puerta Maya Pier isemazantsi ePier yamanye amazwe.
I-Carnival Cruise Line's pier yabucala iyisiqingatha seekhilomitha kumazantsi ePier yamanye amazwe.
ISan Miguel Passenger Ferry Pier (kufutshane nePunta Langosta Pier) kulapho uya kukhwela isikhephe esiya ePlaya del Carmen ukuze uye eCancun.
Indlela elula kwaye engabizi kakhulu yokutyelela iCancun esuka eCozumel kukuthatha Inkonzo yokuloba phesheya okanye IiJets zamanzi zaseMexico ukuya ePlaya del Carmen. Cinga ukuthenga itikiti lokuya kuphela ukugcina ukhetho lwakho luvulekile. Iinkampani zokuloba azihloniphi amatikiti omnye komnye kwaye azitshintshi. I-Ultramar kunye neeJets zaManzi zaseMexico zinokuhamba okuqhubekayo ukusuka eCozumel ukuya ePlaya del Carmen. Ngokuxhomekeke kwimozulu, ukukhwela isikhephe kuthatha malunga nemizuzu engamashumi amane anesihlanu ukuya nokubuya.
Ukufika ePlaya del Carman
EPlaya del Carman, isikhululo seenqanawa sikumbindi wedolophu ibhloko kunye nesiqingatha ukusuka kwesona sikwere siphambili kunye nePlaza Playacar.
Kumhlaba oya eCancun ovela ePlaya del Carmen
Ngaphandle kokuqasha imoto, zimbini iindlela ezisisiseko zokufika ukusuka ePlaya del Carmen ukuya eCancun.
Eyona ndlela inezoqoqosho kukuthatha ADO Ibhasi ibekwe kwi-5th Ave. kunye neJurze. Le bhasi ine-air-conditioning kwaye imithwalo ingagcinwa phantsi kwebhasi kunye neentloko ezingaphezulu. I-ADO Ibhasi isebenza malunga nayo yonke imizuzu engamashumi amathathu kwaye iindleko zi malunga ne-146 pesos okanye i-US $ 4. Ukukhwela ibhasi ukuya eCancun kumalunga neyure.
Kukho iiteksi kwisikhululo sebhasi iABO ePlaya del Carmen. Yenza isivumelwano sakho ngaphambi kokungena eteksini, kuba azilinganiswanga. Iiteksi zisetelwe itshathi yereyithi, ke qiniseka ukuba uyayijonga. Ukuba uhlawula kwiidola zaseMelika, ungabhatala ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 ngaphezulu.
Fumanisa iCancun kuhambo ngenqanawa
Ukuba unexesha lokuhamba ngenqanawa yakho, ungaphoswa yiCancun. Kulula ukufikelela kuyo, kodwa qiniseka ukuba une-layover yobusuku. ICancun yindawo eya kumacala amaninzi ethi ibangele iilwandle, inkcubeko, ubomi bobusuku kunye nokutya. Indlela esondeleyo efunekayo yokufika apho ayibizi kwaye inomdla, iya kukususa kwindlela ebethiweyo, kwaye, okona kungcono, iya kukwazisa ngemimangaliso yaseMexico, ngomhlaba nangolwandle.
Malunga Iindawo Zokungcakaza Ne Memorials Ukufa Kwinkcubeko Ngaphandle Kwehlabathi Iziqinisekiso Ubhaptizo I-Nail Care Nokuyilwa
Amakhambi Ama Abafazi
ungaxelela njani umntu ukuba ufuna ukuba ngumhlobo
owona msebenzi mhle oneminyaka eli-16 ubudala
ukutya okusisitokhwe kwisitokhwe
undazi kangakanani imibuzo yosapho
xa ukhadinali ebonakala ingelosi ikufuphi
Iindidi Zesixokelelwano Irings